Myanmar Association of Japan Alumni ( MAJA )
OKAYAMA (YGN BRANCH)
OKAYAMA (MDY BRANCH)
Japanese Translation Contest & Story Competition
GPA နဲ့ Grading စနစ်အကြောင်းသိမှတ်ဖွယ်ရာအချို ု့
နိုုင်ငံတော်အတိုုင်ပင်ခံပုုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အတွင်း တွေ့ဆုံုပွဲတစ်ခုုမှာ မြန်မာနိုုင်ငံပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်လိုု့ စာမေးပွဲအခြေပြု ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းအမှတ်ပေးနည်းစနစ် (percentage grading system) ကနေ Grade အခြေခံစနစ် (GPA grading system) ပြောင်းဖိုု့ကြိုးစားသွားမယ် ဆိုုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားအချင်းချင်း အမှတ်ပြိုင်ဆိုုင်မှု၊ ၂ မှတ် ၃မှတ်ကွာ၍ လိုုချင်သည့် တက္ကသိုုလ်တက်ခွင့်မရခြင်း စသည်ဖြင့် ပြသနာတွေပြေလည်သွားနိုုင်ဖိုု့လိုု့ဆိုုပါတယ်။
GPA Grading စနစ်အကြောင်း သိသလောက်ပြောရရင်
၁။ What is GPA grading system?
Great Point Average သို့ GPA grading စနစ်ဆိုုတာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုုင်မှု အရည်အချင်းအကဲဖြတ်စနစ် တစ်ခုုဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားရဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုကိုု အကဲဖြတ်ရာမှာ စာမေးပွဲရမှတ် တစ်ခုုတည်းနဲ့မလုံုလောက်ပါဖူး။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာနားလည်တတ်ကျွမ်းမှုအပြင် စာသင်ခန်းတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားမှု၊ စည်းကမ်းလိုုက်နာမှု၊ အလုပ်အချိန်မှီပြီးစီးမှု စတဲ့ တခြားလုုပ်ဆောင်ချက် multi-skills တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်။ စာမေးပွဲရမှတ်အပါအဝင် တခြားလုပ်ဆောင်ချက်ရမှတ်တွေစုုပေါင်းပြီး အကဲဖြတ်တဲ့စနစ်ကိုု GPA grading စနစ်လိုု့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ GPA grading system မှာပဲ GPA grades နဲ့ GPA points ဆိုပြီး အမှတ်ပေးနည်း ၂ခုရှိပါတယ်။
GPA grade ဆိုတာ ဘာသာရပ်အလိုုက် ရမှတ် ၅၀၊ ၇၅မှတ် စသည်ဖြင့် အမှတ်ဖြင့် သတ်မှတ်မည့်အစား A, B, C, D အက္ခရာအစဉ်လိုက် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ wiki မှာတော့ grading စနစ်ရဲ့ အစက Yale တက္ကသိုုလ်က စခဲ့တယ်လိုု့ဆိုုပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့နိုုင်ငံအသီးအသီးက အထက်တန်းနဲ့ တက္ကသိုုလ်များမှာ ကျင့်သုံုးလျက်ရှိပြီး ယေဘုုယျအားဖြင့် A to E သို့ A to F grading scale ကိုုသုံုးကြပါတယ်။
GPA points ဆိုတာကတော့ A,B,C,D,E အစား 1,2,3,4 ကိုသုံးပြီးသတ်မှတ်တာပါ။ အခြေခံအကျဆုံး A-E GPA grade နဲ့ 4.0 GPA point ဆက်သွယ်ချက်ကို ပုံ ၁မှာပြထားပါတယ်။
၂။ How does GPA system work?
GPA စနစ်မှာ စာသင်နှစ်တစ်ခုအတွင်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘာသာရပ်အားလုံုးပေါင်း ပျမ်းမျှအဆင့် သတ်မှတ်တဲ့အခါ စာမေးပွဲရမှတ်အပြင် ဘာသာရပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ တခြားအမှတ်တွေနဲ့ ၁ မှာပြောခဲ့တဲ့ multi-skill ရမှတ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါတယ် ။
အဲ့လိုတွက်တဲ့အခါ credits ဆိုတဲ့ စကားလုံးအသစ်တစ်ခုပါလာပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ အနောက်နိုုင်ငံများမှာ ဘာသာရပ်ကိုု subject အစား course လို့သုံးပါတယ်။ CGPA (Cumulative GPA) ဆိုုတာကတော့ ဘာသာရပ်အားလုံးပေါင်းပျမ်းမျှGPAရမှတ်ကို စုစုပေါင်းရသင့်တဲ့GPA နဲ့ အချိုးချထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
၃။ What are credits?
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ စကားလုံးအသစ် credit ဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်။
credit ဆိုတာလည်း ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာရမှတ်တစ်မျိုးပါပဲ။
အဲ့ဒီရမှတ်ကို သတ်မှတ်ရာမှာ စာမေးပွဲစစ်ပြီးသတ်မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဘာသာရပ် course ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသတွေပေါ်မူတည်ပြီးသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာပြောရရင် သင်ယူတတ်မြောက်ရန်ကြာချိန်ကို ဘာသာရပ်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလို့ယူဆရင် အချိန်တိုအတွင်းတတ်မြောက်နိုင်မယ့်ဘာသာကို credit နည်းနည်းသတ်မှတ်ပြီး အချိန်ပိုကြာတဲ့ဘာသာကို credit များများသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ လက်တွေ့သင်ခန်းစာချိန်ကို ဘာသာရပ်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလို့သတ်မှတ်ပါက လက်တွေ့ချိန်များတဲ့ course က credit များမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဘာသာရပ်ကခက်လေ multi-skill များများလိုလေ credit ပိုများလေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်က အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုအောင်မြင်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ credit ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါဆို ခက်တဲ့ဘာသာချည်းပဲယူပြီး credit အများကြီးရအောင်ယူလို့ရမလားလို့ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ မရပါဘူး။
ကျောင်းတွေမှာ စာသင်နှစ်တစ်ခုအတွက် အနည်းဆုံးနဲ့ အများဆုံးယူရမယ့် credit သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံး credit range သတ်မှတ်ချက် ထဲဝင်တဲ့ကျောင်းသားကအတော်ဆုံးကျောင်းသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျောင်းတွေမတူလို့ သင်ကြားရတဲ့ဘာသာတွေမတူတဲ့အခါ ဘာသာရပ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသအမျိုးမျိုးကို အခြေခံပြီး credit သတ်မှတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီကို သတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ကိုက်ညီလားဆိုတာ အကဲဖြတ်ဖို့လည်း လက်တွေ့မှာမလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါကြောင့် အလွယ်ကူဆုံးအနေနဲ့ ကျောင်းတိုင်းက credit သတ်မှတ်တဲ့အခါ ကျောင်းခေါ်ချိန်ကိုအခြေခံပြီး သတ်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုခက်တဲ့ဘာသာက ကျောင်းခေါ်ချိန်ပိုများလေ့ရှိတဲ့အတွက် credit ပိုများပါတယ်။ ကျောင်းခေါ်ချိန်ဆိုုရာမှာ စာသင်ချိန် lecture time အပြင် လက်တွေ့ practical time နဲ့ ကျောင်းပြင်ပလုုပ်ဆောင်ချက် homework, supplementary reading, writing paper, field work စတဲ့အချိန်တွေပါဝင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းတွေမှာ ဘာသာရပ် course တစ်ခုုကိုုဖော်ပြတဲ့အခါ
Course-name credits (lecture time - practical - self study hrs per week) ပုံုစံနဲ့ရေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ Maths 3(3-0-3) လို့ဖော်ပြထားရင် Maths ဘာသာရပ်အတွက် စုစုပေါင်း3credits (တစ်ပတ်ကို စာသင်ချိန် ၃နာရီ - လက်တွေ့ချိန် ၀ နာရီ- ပြင်ပလေ့လာချိန် ၃နာရီ) လို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။
ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးမှာ credit hours မတူနိုင်ပါဘူး။
ဥပမာ - English course 2(2-2-2), Advanced maths course 3(3-0-6) စသည်ဖြင့်ပေါ့။
အမေရိကန်နိုုင်ငံမှာ course တစ်ခုုအတွက် ယေဘုုယျအားဖြင့် တစ်ပတ်ကိုုစာသင်ချိန် ၃နာရီ၊ စာသင်နှစ်တစ်ခုုအတွက် ၁၆နာရီ သတ်မှတ်တယ်လိုု့ဆိုုပါတယ်။ အဲ့ဒီကမှ ကျောင်းခေါ်ချိန်အနည်းဆုံုးပြည့်မှီတဲ့ကျောင်းသားက အဲ့ဒီ course အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ credit အားလုံးရမှာဖြစ်ပြီး ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်တဲ့ကျောင်းသားက0credit ရပါလိမ့်မယ်။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ တချို့ ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းတက်စရာမလိုုပဲ စာမေးပွဲဖြေရုံုနဲ့ ရတဲ့ credit (exam credits) နဲ့ တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ တခြား course တွေကနေ လွှဲပြောင်းယူနိုုင်တဲ့ credit (transferred credits) ဆိုုပြီးလည်းရှိပါသေးတယ်။ Transferred credits ဆိုုတာကတော့ ဥပမာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က တက်ခဲ့တဲ့ တချို့ဘာသာက credit တွေကို ဒီနှစ်မှ ပေါင်းယူတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံပြီးမြောက်ရမယ့် ဘာသာရပ်တွေ၊ နှစ်ခါထပ်တက်စရာမလိုုတဲ့ ဘာသာရပ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုု မှတ်သားစရာက credit အားလုံုးကိုု တပြိုင်တည်း တခါတည်း ယူလိုု့မရပါဖူး။ ကိုုယ်ကဉာဏ်ကောင်းလို့ တော်လိုု့ ကြိုးစားနိုုင်လိုု့ တစ်နှစ်တည်းနဲ့ credit ၂၀၊ ၃၀ လုံးယူပြီး တစ်နှစ်တည်း ဘွဲ့ယူခွင့်မရှိပါဘူး။ စာသင်နှစ်တစ်ခုစီအတွက် register လုုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ အနည်းဆုံုးနဲ့အများဆုံုး credit သတ်မှတ်ချက်တွေ ကျောင်းတိုုင်းမှာ ရှိပါတယ်။
၄။ GPA calculator
credits ကနေ GPA တွက်တဲ့အခါ
၁) weighted GPA
၂) unweighted GPA ဆိုပြီးတွက်နည်း ၂နည်းရှိပါတယ်။
နမူနာအနေနဲ့ ဘာသာရပ် ၄ခုုယူရတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် grade points ရလဒ်များမှတဆင့် GPA တွက်နည်းကို ပုံ ၂မှာပြထားပါတယ်။
unweighted GPA ဆိုတာ credits မပါတဲ့ တွက်ချက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် သာမန် အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့အတူတူပါပဲ။ weighted GPA မှာတော့ ယူတဲ့ဘာသာရပ်ရဲ့ credits ပေါ်မှာမူတည်ပြီး ရမှတ်တွေကွဲသွားမှာပါ။ ဥပမာ ဘာသာရပ်၄ခုယူတဲ့ ကျောင်းသား ၂ယောက်ဟာ grade A ( ၉၅မှတ်) ရတာချင်းတူရင် credit မြင့်တဲ့ ဘာသာရပ်ကိုုယူတဲ့ကျောင်းသားရဲ့ GPA က credit နည်းတဲ့ဘာသာကိုုယူတဲ့ ကျောင်းသားထက်မြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ credit များတဲ့ ဘာသာရပ်က ပိုုခက်ပြီး ကြိုးစားအားထုုတ်မှုပိုုမယ်လိုု့လည်း အကြမ်းအားဖြင့် သိနိုုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း လက်ရှိမှာ weighted GPA စနစ်ကိုု အသုံုးများကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်း သတ်မှတ်ချက်မတူနိုုင်တဲ့အတွက် ကိုုယ့်ကျောင်းရဲ့ GPA တွက်နည်း grades သတ်မှတ်နည်းကိုု သိထားဖိုု့တော့လိုုပါတယ်။
၅။ Pros of GPA grading system (GPA စနစ်ကောင်းကျိုးများ)
လက်ရှိမှာ နိုုင်ငံတကာကုုမ္ဗဏီများက အလုုပ်ခေါ်တဲ့အခါ အလုုပ်သင် သိုု့ ဘွဲ့ရပြီးစလူတွေကိုု GPA, CGPA အမှတ်တွေဖော်ပြထားတဲ့ Transcripts (အောင်စာရင်း) တောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုုတော့ GPA, CGPA တွေက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်း၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကိုု အကြမ်းအားဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ GPA မြင့်တဲ့သူတွေကိုု အလားအလာကောင်းတဲ့ ဝန်ထမ်းအဖြစ် ယေဘုုယျသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ wiki မှာဖော်ပြထားတာကတော့ ၂၀၁၄ခုုနှစ်စစ်တမ်းများအရ အမေရိကန်နိုုင်ငံမှာ ဘာသာရပ်အမှတ် score points တစ်မှတ်တိုုးခြင်းက တစ်နှစ်ပျမ်းမျှလစာ ၁၁ရာခိုုင်နှုန်းတိုုးစေနိုုင်ပါတယ်လိုု့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
GPA grading စနစ်ရဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်တွေကတော့ စာသင်နှစ်တစ်နှစ်မှာ ဘာသာတွေအားလုံုးစုုပြုံလေ့လာစရာမလိုုပဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ credit လိုုအပ်ချက်အတွင်းမှာ ခက်တဲ့ဘာသာ ၁ခုုနဲ့ လွယ်တဲ့ဘာသာ ၂ခုုစသည်ဖြင့် ပေါင်းယူနိုုင်တဲ့အတွက် ဘာသာရပ်ဆိုုင်ရာလေ့လာမှုလည်း ပိုုအားကောင်းလာနိုုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် GPA စနစ်က ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီကိုု လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုလည်းပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ- ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ပထနှစ်နဲ့ ဒုုတိယနှစ်တွေမှာ တတ်နိုုင်သလောက် credits အများဆုံုးပြီးအောင်ယူထားတဲ့အခါ နောက်ဆုံုးနှစ်မှာ internship လိုု့ခေါ်တဲ့ အလုုပ်မှာလက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုလုုပ်ဖိုု့ အချိန်ပိုုထွက်လာအောင် ကျောင်းစတက်ကတည်းက အစီအစဉ် ဆွဲထားနိုုင်ပါတယ်။
၆။ Cons of GPA grading system (GPA စနစ်သုံးခြင်းအပြစ်များ)
GPA စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုုကတော့ ဘာသာရပ်ဆိုုင်ရာသင်ကြားသူ ဆရာဗဟိုုပြုစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာရဲ့ဘက်လိုုက်မှု နဲ့ မတရားတာတွေ ရှိနိုုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အကဲဖြတ်စနစ်နဲ့ရလဒ်များတွေအားလုံုး ကျောင်းသားတိုုင်းသိအောင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေခြင်း နဲ့ကျောင်းသားများကဆရာအပေါ်အကဲဖြတ်စနစ် evaluation စတာတွေကိုုသုံုးပြီး ဘက်လိုုက်မှုကိုု ဖြေရှင်းနိုုင်ပါတယ်။ အကဲဖြတ်စနစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မကျေနပ်၍ ကျောင်းသားက တိုုင်းကြားခဲ့ရင်လည်း revison ပြန်လုုပ်နိုုင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုု အမှတ်၁၀၀အခြေခံ ကျ/ရှုံး marking စနစ်ထက် လုုပ်ဆောင်မှုအခြေခံ GPA grading system ကပိုုအရေးပါမှန်း သိလောက်ပါပြီ။ နိုုင်ငံတကာမှာတော့ ဘွဲ့ရပညာတတ်တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကိုု GPA ကိုုကြည့်ပြီး ယုံုယုံုကြည်ကြည်အကဲဖြတ်ကြပါတယ်။
ကျောင်းနဲ့ တက္ကသိုုလ်တွေရဲ့ ကျော်ကြားမှု နံမည်ကြီးမှုကိုုလိုုက်ပြီး ကျောင်းသားဘက်က ကြိုးစားအားထုုတ်မှုပိုုလာသလိုု အဲ့ဒီကျောင်းကမွေးထုုတ်လိုုက်တဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ GPA ရမှတ်ကလည်း ယုံုကြည်မှုပိုုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - သာမန်တက္ကသိုုလ်က GPA 4.0 ရတဲ့ကျောင်းသားထက် MIT တက္ကသိုုလ်က GPA 3.4 ရတဲ့ကျောင်းသားက ပိုုတော်မယ်လိုု့ ယေဘုုယျ ယုံုကြည်ထားတာမျိုးပေါ့။
လက်ရှိ percentage score အခြေခံစနစ်ကျင့်သုံုးနေတဲ့ မြန်မာနိုုင်ငံက အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ တက္ကသိုုလ်အားလုံုးလည်း လက်တွေ့အသုံုးချပညာရေးစနစ်ကိုုသွားနိုုင်ဖိုု့ GPA grading စနစ်ကိုု ပြောင်းလဲဖိုု့ လိုုကိုုလိုုအပ်ပါတယ်။ GPA grading စနစ်အောင်အောင်မြင်မြင်ကျင့်သုံုးလာနိုုင်တဲ့အခါကျရင်တော့ နိုုင်ငံတကာကျောင်းများနဲ့ ပေါင်းကူးသင်ကြားတာတွေ (မြန်မာမှာဒုုတိယနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားက နိုုင်ငံခြားတက္ကသိုုလ်မှာ တခြားဘာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲမှမလိုုပဲ တတိယနှစ်ကဆက်တက်ခွင့်ရှိတာ) ဘွဲ့ဒီဂရီတွေကလည်း အမှန်တကယ်တတ်ကျွမ်းမှုအပေါ် အခြေခံလာတာဖြစ်လိုု့ နိုုင်ငံတကာအလုုပ်အခွင့်အလမ်းများလည်း သူ့အလိုုလိုုပိုုရလာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံုးအနေနဲ့တော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေရဲ့ ပညာရေးအပေါ်အလေးထားမှု နဲ့ ပညာလိုုချင်စိတ်၊ လေ့လာသင်ယူချင်စိတ်တွေကိုု ငယ်စဉ်ကတည်းက မူကြိုအရွယ် သူငယ်တန်းအရွယ်ကစလိုု့ စနစ်တကျ ပျိုးထောင်ပေးဖိုု့ လွန်စွာအရေးကြီးတယ်လိုု့ထင်မြင်မိပါကြောင်း။
အမှတ်၁၀၀ဖိုးအခြေခံ percentage score တွေကို GPA အမှတ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
နိုင်ငံခြားကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဝင်ခွင့်လျှောက်တဲ့အခါ ကိုယ်အောင်မြင်ပြီးခဲ့တဲ့အတန်းရဲ့ GPA တောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအခါ မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေအတွက် အမှတ်စာရင်းမှာရေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ၈၄မှတ် သချာၤ ၉၀ မှတ်စတဲ့ အမှတ်၁၀၀ဖိုးအခြေခံ percentage score တွေကို GPA ပြောင်းဖို့လိုလာပါတယ်။
Percentage score ကနေ GPA ပြောင်းနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေ ဒီပို့စ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Percentage to GPA ပြောင်းတဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းကတော့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာရမှတ်ကို ၁၀၀နဲ့စားပြီး ၄ နဲ့မြှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (အများစုလက်ခံထားတဲ့ GPA စနစ်က GPA 4.0 စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ၄ နဲ့မြှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
GPA = ( percentage score /100) *4
နမူနာ ပုံ ၁ မှာကြည့်ပါ။
Percentage to GPA 4.0 ပြောင်းတဲ့နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါသေးတယ်။ အသုံးများတဲ့ conversion နောက်တစ်ခုကို နမူနာ ပုံ ၂မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ပုံ ၁နဲ့ ၂အရ percentage score တူပေမယ့် ပြောင်းတဲ့စနစ်မတူရင် GPA လည်းမတူပါဘူး။
ဒါကြောင့် အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်လျှောက်မယ့်ကျောင်းရဲ့ GPA စနစ်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ တွက်ပုံတွက်နည်းကို သိဖို့လိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် GPA နဲ့ percentage score စနစ်၂ခုကလည်း အခြခံမတူတဲ့အတွက် ပုံ၁နဲ့ ၂မှာလို equation သုံးပြီးပြောင်းလို့ရလာတဲ့ GPA တွေက တိကျတဲ့ GPA မဟုတ်ပဲ ခန့်မှန်း GPA တွေပဲဖြစ်ကြောင်းသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ခန့်မှန်း GPA ကို Equivalent GPA လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကျောင်းလျှောက်တဲ့အခါ GPA တစ်ခုတည်းတောင်းတာမဟုတ်ပဲ ဘွဲ့လက်မှတ်၊ အောင်လက်မှတ်စတာတွေအပြင် transcript လို့ခေါ်တဲ့ အမှတ်စာရင်းပါတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။
အမှတ်စာရင်းမှာ ရမှတ်တွေက percentage score system ကိုအခြေခံပြီးတွက်ထားတဲ့ရမှတ်တွေဖြစ်နေခဲ့ရင် GPA ပြောင်းတဲ့အခါ သတိထားရမယ့် အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။
၁) တချို့ကျောင်းတွေက percentage score ကနေ GPA ပြောင်းတဲ့အခါအပေါ်ကလို equation သုံးပြီးပြောင်းထားတဲ့ Equivalent GPA ကိုလက်မခံပါဘူး။ အဲ့ဒီအခါ transcript နဲ့အတူ ကိုယ့်ကျောင်းရဲ့ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းစနစ်၊ အမှတ်ပေးတွက်ချက်ပုံတွေကိုပါတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုတောင်းခဲ့ရင်တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်း၊ မော်ကွန်းထိန်းတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းကိုတောင်းခံပါ။
၂) Percentage score ကနေ GPA အတိအကျပြောင်းပေးတဲ့ဆားဗစ်တွေရှိပါတယ်။ percentage score နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ transcript ကို GPA transcript ပြန်ထုတ်ပေးတာပါ။ မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ မှတ်ပုံတင် သန်းခေါင်စာရင်းတွေကို နိုတြီ (notary) ပြန်သလိုပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွက် အခကြေးငွေပေးရပါတယ်။
၃) percentage score နဲ့ GPA တို့ရဲ့ မတူညီတဲ့စနစ်ကို ညှိဖို့အတွက် percentage score ကိုအခြေခံတွက်တဲ့နိုင်ငံတွေက ကျောင်းသားတွေ GPA ကိုအခြေခံပြီးတွက်တဲ့ကျောင်းတွေကို ဝင်ခွင့်လျှောက်တဲ့အခါ GCE General Certificate of Education လို့ခေါ်တဲ့ စာမေးပွဲဖြေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေ GCE O level နဲ့မလုံလောက်ပဲ GCE Advanced level စာမွေးပွဲတွေပါဖြေကြရပါတယ်။ နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ ကိုယ်ကတက္ကသိုလ်မှာ ဒုတိယနှစ်အောင်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာတတိယနှစ်တက်ဖို့လျှောက်တဲ့အခါ တတိယနှစ်ကိုတိုက်ရိုက်တက်ခွင့်မရပဲ ဒုတိယနှစ်ကပြန်စတက်ရတယ်ဆိုတာလည်း ကိုယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ လျှောက်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့အမှတ်ပေးစနစ် မတူတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
၄) တချို့ကျောင်းတွေက GPA points စနစ်ကိုမသုံးပဲ GPA grade score ကိုသုံးတယ်ဆိုရင် ပုံ ၁နဲ့ ၂မှာကဲ့သို့တွက်လို့ရလာတဲ့ points တွေကို grade score ပြန်ပြောင်းရပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီအခါလည်း ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီး grade သတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ A to D, A to E, A to F စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိသလိုု +/- သတ်မှတ်ချက် ၊ range သတ်မှတ်ချက်တွေလည်း ကွဲတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် A to C အထိကိုု Pass လိုု့သတ်မှတ်ပြီး D က conditional pass နဲ့ E ကတော့ fail ဖြစ်ပါတယ်။
A - E ကဲသို့ ရမှတ်အခြေခံ grade အပြင် တခြားလုုပ်ဆောင်ချက်အခြေခံ grade ဥပမာ - I Incomplete, S Satisfactory, U Unsatisfactory, W Withdrawal စတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
GPA points နဲ့ grade ဆက်သွယ်ချက်၊ percentage score ဆက်သွယ်ချက်နမူတွေကို ပုံ ၃ နဲ့ ၄မှာပြထားပါတယ်။
၂၁ကြိမ်မြောက် ဂျပန်ဘာသာစကားပြောပြိုင်ပွဲအတွက် ပဏာမအဆင့် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်အား ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
No. 2B-4, Snow Garden Housing, Thu Mingalar Street, Hnin Si Gone (KA) Quarter, Thingangyum Township, Yangon, Myanmar.
visitors : 50,192